Nilaza fanekena dia fototra hevitra-Mety hisy hilaza ny faniriany fatratra akaiky (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) paminaniana fikarohana etika. Ny tsotra indrindra dikan-fikarohana fitsipika hoe: "fahalalana ampy fanekena ho an'ny zava-drehetra." Izany fitsipika tsotra, na izany aza, tsy mifanaraka amin'ny etika efa misy fitsipika, fitsipika etika, na ny fikarohana fomba fanao. Kosa, mpikaroka tokony, dia afaka, ary aza manaraka ny fitsipika sarotra kokoa: "sasany endriky ny fanekena ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana."
Voalohany, mba hifindra any an-dafin'ny hevitra tsotra be loatra momba ny nilaza fanekena, Te-hilaza aminao bebe kokoa momba an-tsaha fanandramana nianatra ny fanavakavahana (ireo voasarona kely ao amin'ny Toko faha 4 ihany koa). Ao amin'ny fampianarana ireo, sandoka mpiadina izay manana toetra samy hafa, toy ny lehilahy na ny vehivavy-mampihatra ny asa samy hafa. Raha misy karazana mpangataka nanamby vokany amin'ny taha ambony, dia mety hanatsoaka hevitra ny mpikaroka fa mety hisy ny fanavakavahana eo amin'ny dingana ny fanaramàna. Fa ny tanjon'ny amin'ity toko ity, ny zava-dehibe indrindra momba ireo fanandramana dia ny mpandray anjara ao amin'ireo fanandramana-ny mpampiasa-tsy manome fanekena. Raha ny marina, ireo mpandray anjara dia mavitrika voafitaky ny fampiharana ny hosoka. Na izany aza, an-tsaha fanandramana nianatra fanavakavahana no tanterahina any, fara fahakeliny, 117 fanadihadiana tamin'ny 17 firenena (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Mpikaroka izay mampiasa saha fanandramana nianatra fanavakavahana efa fantatra ny lafiny efatra izany fampianarana izany, miaraka, ho azy ireo-pahamendrehana azo atao: 1) ny voafetra fahavoazana ho an'ny mpampiasa, 2) ny lehibe ara-tsosialy soa ny fananana azo itokisana ohatry ny fanavakavahana, 3) ny fahalemena ny fomba hafa ny nandrefesany ny fanavakavahana, ary 4) ny zava-misy fa tsy mafy fitaka mandika ny fitsipika ao izay toerana (Riach and Rich 2004) . Toe-javatra tsirairay ireo zava-dehibe, ary nanana ny azy ireo tsy afa-po, ny etika raharaha ho sarotra kokoa. Telo amin'ireo endri-javatra azo homarinana avy amin'ny etika fitsipika ao amin'ny Belmont Report: voafetra ratsy (Ny fanajana ny olona sy Beneficence) ary tombontsoa lehibe sy ny fahalemen'ny hafa fomba (Beneficence sy Rariny). Ny endri-javatra farany, tsy fandikana ny contextual fenitra, azo homarinana avy amin'ny Menlo Report ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest. Amin'ny teny hafa, asa fangatahana dia amin'ny toerana izay misy ny sasany efa miandry azo atao famitahana. Noho izany, ireo fanandramana tsy mandoto ny tontolo etika efa madio mangalahala.
Ankoatra izany fitsipika miorina amin'ny hevitra, am-polony ihany koa IRBs nanatsoaka hevitra fa ny tsy fahampian'ny fanekena ao amin'ireny fikarohana ireny no mifanaraka amin'ny fitsipika-misy, indrindra Common Fitsipika §46.116, ampahany (d). Farany, US fitsarana ihany koa nanohana ny tsy fisian'ny fankatoavana sy ny famitahana any an-tsaha fanandramana mba handrefesana ny fanavakavahana (No. 81-3029. United States Fitsarana Ambony, fahafito Circuit). Noho izany, ny fampiasana ny andrana an-tsaha tsy misy fanekena dia efa misy mifanaraka amin'ny etika sy ny fitsipika efa misy fitsipika (fara fahakeliny, ny fitsipika ao amin'ny US). Fandresen-dahatra io no tohanan'ny fiaraha-monina malalaka fikarohana fiaraha-monina, am-polony ny IRBs, sy ny US Fitsarana Ambony. Noho izany, tsy maintsy mandà ny fitsipika tsotra "fahalalana ampy fanekena ho an'ny zava-drehetra." Tsy mpikaroka ny fitsipika izay manaraka, na dia izany ny fitsipika izay mpikaroka manaraka izany.
Mandroso mihoatra "noho ny zava-drehetra fahalalana ampy manaiky" mamela mpikaroka amin'ny sarotra fanontaniana: inona no karazana fanekena no ilaina Fa inona no karazana fikarohana? Mazava ho azy, nisy Mitana mialoha adihevitra manodidina io fanontaniana io, na dia ny ankamaroany ny any amin'ny sehatry ny fikarohana ara-pitsaboana eo amin'ny Analog taona. Mamintina izany adihevitra, Eyal (2012) nanoratra hoe:
Lalin-tsaina manan-danja iray avy mialoha izany adihevitra dia ny hoe fanekena dia tsy fahalalana ampy na rehetra na inona na inona; misy matanjaka sy malemy kokoa endrika ny fanekena. Amin'ny toe-javatra sasany, matanjaka fahalalana ampy fanekena toa ilaina, fa, amin'ny toe-javatra hafa, malemy kokoa endriky ny fanekena dia mety ho tsara. Manaraka, aho telo toe-javatra izay mamaritra ny mpikaroka no miady mafy mba hahazoana fahalalana ampy fanekena avy amin'ny antoko voakasiky rehetra sy ny safidy vitsivitsy amin'izany toe-javatra.
Voalohany, indraindray mangataka ireo mpandray anjara mba hanome fahalalana ampy fanekena dia mety hampitombo ny loza izay atrehiny. Ohatra, ao amin'ny encore, mangataka olona miaina ambany famoretana governemanta mba hanome alalana mba hanana ny solosaina ampiasaina amin'ny fandrefesana ny sivana aterineto mety hametraka ireo izay manaiky amin'ny nampitombo ny dona. Rehefa mitarika ho amin'ny fitomboan'ny fanekena mety, mpikaroka dia afaka antoka fa vaovao mikasika ny zavatra ataony dia ampahibemaso ary fa azo atao ny mpandray anjara mba misafidy-out. Koa, dia afaka mitady faneken'ny avy amin'ny vondrona izay maneho ny mpandray anjara (ohatra, ONG).
Faharoa, indraindray manana fahalalana ampy fanekena tanteraka ny fianarana manomboka eo anatrehan'ny mety hanimba ny ara-tsiansa sarobidy ny amin'ny fianarana. Ohatra, fihetseham-po areti-mifindra, raha efa fantany fa mpandray anjara mpikaroka no nanao fanandramana momba ny fihetseham-po, izany mety ho nanova ny fitondran-tenany. Mihazona ny vaovao avy amin'ny mpandray anjara, ary mamitaka azy ireo mihitsy aza, dia tsy mahazatra eo amin'ny fiaraha-monina fikarohana, indrindra fa ao amin'ny laboratoara fanandramana in psikolojia. Raha nilaza fanekena tsy azo atao mialoha ny fianarana manomboka, mpikaroka afaka (ary matetika aza) debrief mpandray anjara rehefa tapitra ny fianarana. Fiatrehana ny fahatairana ankapobeny dia ahitana ny manazava ny zavatra tena nitranga, remediating na hanimba, ary nahazo fanekena araka ny zava-misy. Misy ady hevitra, na izany aza, mikasika ny fiatrehana ny fahatairana na any an-tsaha fanandramana mety, raha ny fiatrehana ny fahatairana mihitsy no Mampidi-doza ny mpandray anjara (Finn and Jakobsson 2007) .
Fahatelo, indraindray dia sarotra ny handray logistically fahalalana ampy fanekena avy amin'ny rehetra fiantraikany noho ny fianarana. Ohatra, sary an-tsaina ny mpikaroka izay maniry hianatra ny Bitcoin blockchain (Bitcoin dia crypto-vola sy ny blockchain dia firaketana an-tsoratra rehetra Bitcoin varotra (Narayanan et al. 2016) ). Ny olona sasany izay mampiasa Bitcoin manantena sy maniry anarana, ary ny sasany mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Bitcoin mety hanohitra ny sasany endrika ny fikarohana eo amin'ny fiaraha-monina. Indrisy anefa, dia azo atao ny mahazo faneken'ny avy amin'ny olona rehetra izay mampiasa Bitcoin satria maro ny olona no tsy mitonona anarana ireny. Amin'ity tranga ity, ny mpikaroka afaka miezaka ny hifandray ny santionan'ny Bitcoin mpampiasa ary mangataka ny nampahafantatra fanekena.
Ireo telo mpikaroka antony mety tsy ho afaka ny hahazo fahalalana ampy fanekena-mitombo mety, mampandefitra fikarohana tanjona, sy ny ara-pitaovana fetra-tsy ny antony ihany izay mpikaroka miady mafy mba hahazoana nampahafantatra fanekena. Ary, ny vahaolana izay efa nanolo-kevitra-nampahafantatra ny vahoaka momba ny fikarohana, manampy ny hifidy-nivoaka, mitady fanekena avy amin'ny fahatelo-antoko, fiatrehana ny fahatairana, sy ny fitadiavana faneken'ny avy ny santionany ny mpandray anjara-Mety tsy ho azo atao amin'ny toe-javatra rehetra. Ankoatra izany, na dia azo atao ireo safidy ireo, dia mety tsy ho ampy ho an'ny fianarana. Inona ireo ohatra ireo manao fampisehoana, na izany aza, dia ny hoe fanekena dia tsy fahalalana ampy na rehetra na inona na inona, ary ny mamorona vahaolana afaka manatsara ny fifandanjana ny fampianarana etika izay tsy afaka mandray fahalalana ampy fanekena tanteraka avy amin'ny antoko fiantraikany rehetra.
To hanatsoaka hevitra, fa tsy "fahalalana ampy manaiky ny zava-drehetra" mpikaroka tokony, dia afaka, ary aza manaraka kokoa sarotra fitsipika: "sasany endriky ny fanekena ho an'ny ankamaroan'ny zavatra." Miseho amin'ny teny ny fitsipika, baovao fanekena dia tsy ilaina tsy ampy ny fitsipika ny fanajana ny olona [ Humphreys (2015) ; p. 102]. Ankoatra izany, fanajana ny olona dia iray monja amin'ireo ireo fitsipika izay mila mahay mandanjalanja rehefa manao fikarohana fitsipika; tsy tokony mandeha ho azy manafotra Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest, teboka iray nanao imbetsaka amin'ny ethicists nandritra ny 40 taona [ Gillon (2015) ; p. 112-113]. Miseho amin'ny resaka etika rafitra, nilaza fanekena ny zava-drehetra dia loatra deontological toerana izay milatsaka niharam-boina ny toe-javatra toy ny Timebomb (jereo ny fizarana 6.5).